Trickster ” နိုင်ငံကျော်ကပ်ဖား” လူယုတ်မာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » Trickster ” နိုင်ငံကျော်ကပ်ဖား” လူယုတ်မာ
Posted by ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် on Mar 18, 2011 in Letter to The Editor, Opinions & Discussion | 21 comments
ဓါတ်ပုံတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းဖြစ်နေသည့်အတွက် ပုံမပေါ်လျှင်လည်းသည်းခံ ခွင့်လွှတ်ပေးပါရှင့်၊
သံတွဲမြို့မှပြည်သူများမှာကြီးစွာသောဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်၊ ကပ်ဖားရဲ့နောက်ဆက်တွဲ ဒုက္ခပေးမှုကြောင့် ယ္ခုအခါ
သံတွဲမြို့တွင်ခေတ်အဆက်ဆက်မှ နေထိုင်ကြပါသော.အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအား ခရီးသွားလာခွင့် (ဗီစာ) ကို မည်
သူတစ်ဦး တစ်ယောက်မှ မပေးတော့ဘဲ လုံးဝပိတ်လိုက်ကြောင်းသတင်းဆိုးတင်ပြလိုပါတယ်၊
ယ္ခုသော် မကျန်းမမာ နေမကောင်းဖြစ်သူများ မှာ အသက်ပင်အသေခံကြရတော့မည့်အခြေအနေ ကဒ်ဆိုး ကျရောက်
ခြင်းခံနေကြရပါကြောင်း အများပြည်သူများသိရှိရလေအောင် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လ.ဝ.က ခရိုင်မှုးက ၎င်းအား အင်တာနက်ပေါ်သို့တင်ခြင်းအတွက် လက်စားချေ လိုက်သည့်သဘော
လ.ဝ.က ခရိုင်မှုး နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်သူမှာ အများသိကြသည့် “ကပ်ဖား ထွန်းသန့်ကျော်” ဖြစ်ပါသည်၊ ကျမ အားသွေး
ဆောင်ဖျားယောင်းသိမ်းသွင်းခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်၊ ၎င်း၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော ရဲအောင်လံကားဂိတ်၊ ရွှေသံတွဲ
ကားဂိတ် အစရှိသည်တို့တွင် မိန်းကလေးဝန်ထမ်းများကိုသာလျှင်ရွေးချယ်ခန့်ထားပါသည်၊
ကပ်ဖားလူယုတ်မာ ထွန်းသန့်ကျော် သည် ဝန်ထမ်းမလေးများအားနေ့စဉ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ သွေးဆောင်ဖျားယောင်း
လ.ဝ.က မှုးနှင့် ကပ်ဖားကြီး သည် မကြာခဏ တွဲသွားတွဲလာ ပြုလုပ်နေကြခြင်း ကို မြို့သူမြို့သားများ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပင်
ဖြစ်ပါသည်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်တင်ခံရခြင်းအတွက် ဒေါသထွက်နေသော ခရိုင်မှုးအား အားပေးနှစ်သိမ့်၍ အစ္စလာမ် ဘာသာ
ဝင်များအပေါ် ဒုက္ခပေးရန်နေ့စဉ် ကြံစီလျှက်ရှိနေကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်၊
သတင်းရခဲ့ပြီး မကြာခင်လေးမှာ ခရီးသွားလာခွင့် ပိတ်လိုက်ကြောင်း လ.ဝ.က ရုံး၏ ဝှိုက်ဘုတ် တွင်ရေးထားကြောင်းသိရပါသည်၊
သက်ဆိုင်ရာမှလည်း အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးနေပါကြောင်းသိရပါသည်၊
ကပ်ဖားကျော်ကျော် အား ဟိုးယ္ခင် အခါ ကလည်းစစ်ဆေးခံခဲ့ရဘူးပါသည်၊ ကျမကြားသိရသည်မှာ ယ္ခင်စစ်ဆေးခဲ့သော စစ်ဆေး
ရေးအဖွဲ့ အား သိန်း ၇၀ ခန့်အကုန်အကျခံ၍ ကပ်ဖားယပ်ဖား လုပ်လာဘ်ငွေထိုးခဲ့သောကြောင့် ထောင်ကျမည့်အရေးမှလွတ်
သူပြောခဲ့သောစကားများကို ယ္ခုတိုင်ကြားယောင်နေပါသည်၊ သူပြောခဲ့ပုံမှာ ” ဟဲဟဲ..ဘယ်ရမလဲကွာ..ငါ့ကို မလောက်လေး
မလောက်စားအကောင် တွေက..ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ် ” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်ရှင့်၊
ယ္ခုလည်း အရင်တုန်းက ၇၀ ခု ၁၀၀ ကုန်သွားလဲ ဘာမှမဖြစ် အသေးသုံးသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေသံများကြားနေခဲ့ရ
စစ်ဆေးသည့်အဖွဲ့ မှာသံတွဲမြို့မှ ရဲအရာရှိများဖြစ်နေသောကြောင့် ကပ်ဖား၏ လာဘ်ငွေအကျိုးကျေးဇူးမှကင်းလွတ်၍ အမှန်
အတိုင်းဖြစ်လာစေရန် မဝံ့မရဲ ဆုတောင်းနေရုံမှတစ်ပါးမည်သို့မှမတတ်နိုင်တော့ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်ရှင်။
ထွန်းသန့်ကျော် (ကုလားမသား ) က ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။
သူလုပ်တာ မဟုတ်တာတွေက ဘာလဲ ပိုပြီးရှင်းအောင်ပြောပြပါလား။
မွတ်စ် တွေ အပိတ်ခံရတာက သူနဲ့ဘယ်လို ပတ်သက်တာလဲ။
အော်..ထွန်းသန့်ကျော်..ထွန်းသန့်ကျော်.. မင်းအမေ က သံတွဲမြို့ ဇာဒီပြင်ရွာသူမ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်..မင်းအဖေ က ချင်းရခိုင်အစပ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်. ကဲ ကဲ ကြည့်လို့ ကောင်းပြီပေါ့.. မင်းအဖေနဲ့အမေတို့က ဇာဒီပြင်ရွာမှာဘဲ အစ္စလာမ် တရားတော်နဲ့အညီ နေကာရှာဒီ (မင်္ဂလာဆောင်) ပြုလုပ်ခဲ့ကြပီးသားနော်.. ဒီတော့ မင်းအဖေရဲ့ အာရ်ဘီ နာမည်က နူယာဟာဆင် ၊မင်းအမေရဲ့အမည်က ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် က ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးဆိုတော့ ပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကွာ..ဒီ ၂ ယောက်မျိုးစပ် ပြီးမွေးလာတဲ့ မင်းလိုကောင်က ဟား ဟား ရီစရာပါကွာ..နိုင်ငံသားကဒ် မှာ ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဆိုပါလား ..ဘာတဲ့..၇/မလန (နိုင်) ၀၀၀၀၅၇ ..ဆိုလား.. ပိုင်လိုက်ပုံ ကတော့..မင်းက မင်းမိဘတွေရဲ့ အစဉ်အလာကိုဖျက်ပီး..ဒီလိုမှတ်ပုံတင် အတု ကိုင်ဆောင်လိုက်ရုံနဲ့ ရရောလား ကွ..ဟေ…မင်းက မင်းလှမြို့ လ.ဝ.က ကို လာဘ်ထိုးပီး မှတ်ပုံတင်အတု လုပ်လို့ ပီးမှာလား…ဟား ဟား လို့ ဟားတိုက်လို့သာ ရီချင်ပါသဘိကွာ..သံတွဲမြို့ လ.ဝ.က ကို နောက်တစ်ခါ လာဘ် ငွေပေးပီး နောက်ကြောင်းဖျောက်ပစ်လို့ ရော ရမှာလား…မင်းအခုမှ ကြိုးစားလဲ အချီးနှီး ပါ ငါ့လူရာ..မင်းက လူတွေကို ဒုက္ခ ပေးနေတာအရမ်းကြာနေပါပကော . ဒီတစ်ခါတော့ အလှည့်ကျ မနွဲ့စတမ်းပေါ့နော…ဟိဟိ.. အံမယ် အံမယ် ခုလုပ်နေ ပုံကတော့ အသစ်ရောက်လာတဲ့ သံတွဲစခန်းမှုး နဲ့ ရင်ချင်းကပ်နေပြန်ပကော.. ဟဟ ..ဒီစခန်းမှုးနဲ့ တစ်ခုခုတော့ကြံနေကြပြန်ပီလို့ သတင်းက ရောက်လာပြန်။ ရော ခက်ပီ…ခု သူနဲ့မသင့်တဲ့ လူတွေကိုတဲ့… လုပ်ကြံသက်သေ ဖန်တီးပီး အပြတ်ချေမှုန်းတော့မဲ့ စီမံကိန်းကြီး အကောင်အထည်ဖေါ်နေပြန်ပီတဲ့ဗျ… ဖြစ်ပုံ က ဒီလိုဗျ…လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂.၃.၂၀၁၁ နေ့ည ၁၂ နာရီခန့်မှာပေါ့ဗျာ..သူ့တိုက်ကိုသူ ခဲနဲ့ထုခိုင်းသတဲ့..မှန် ၅ ချပ်လောက်အဆုံးရှုံးခံ ရင်းလိုက်တယ်ပေါ့.. အကြံပိုင်လိုက် ပုံက သြချရလောက်တယ်..ပီးတော့ သက်သေရှာ လုပ်ကြံဇတ် ဘဲ ပြောပါရစေတော့…အဲ့ဒါ စခန်းမှုးနဲ့ ခေါင်းချင်းဆိုင်နေပီလေ.. သိပ်မကြာတော့ပါ ဘူး .. လက်ညှိုးထိုး ခဲထု တရားခံ ဖမ်းခံကြရတော့မှာ.. အင်းလုပ်ပေါ့ကွာ.. နောက်ပီးတစ်ခုရှိသေး.သူတိုက် (သ်ိန်း ၁၀၀၀ တန်) ကြီးကို ဟိုတစ်လော က ပြောင်းသွားတဲ့ အခွန်ဦးစီးက အမြတ်ခွန်ကောက်မလို့သူ့ကိုခေါ်စစ်တော့ ဦးစီး ခမျာ ထိုင်ရှစ်ခိုးပီး တောင်းတောင်းပန်ပန်ပြန်လွှတ်လိုက်ရသတဲ့ဗျာ..ဖြစ်ပုံကဒီလိုဗျ ..ဇတ်လိုက်ကြီး ထွန်းသန့်ကျော် က ခင်ဗျားကိုကျုပ်မပေးနုင်ဘူး..ငါပေးသလောက်ယူမလား..အလုပ်ပြုတ်ခံမလား လို့ ပြောပါလေရောတဲ့..ဒီတော့ အခွန်ဦးစီးခမျာ..မျက်လုံးပြူး လျှာထွက်ဖြစ်ရပီလေ. ဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲ.အဲဒီဖိုင်တွဲကို ဘီဒိုထဲ ထည့်ပီး နောက်ရောက်လာမဲ့ ဦးစီး အသစ် အတွက်ထားခဲ့ပါရော…ဟော ခု ဦးစီးအသစ်ရောက်ပြန်တော့ အဲဒီလို ခြောက်လှန့်ပြန်တော့..ဘာပြောကောင်းမလဲ ..အေးဆေးပေါ့နော်.. သူ့ရဲ့အခွန်ရှောင်ပုံလေးကတော့ အဆင်ပြေလိုက်တာဗျာ..အားကျသလို တောင် ဖြစ်မိပါရဲ့…. မှတ်ပုံတင် (အင်) အတု ရယ်..အခွန်ရှောင် ရယ်တွေကို စစ်ဆေး သင့်ကြောင်းပါ..ကဲကဲ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒီလောက်ပါဘဲအရပ်ကတို့ရေ..။
ကောင်းလိုက်လေ ဒီသတင်းအပုတ် ကလဲ နံပါ့ ၊ ဒါဆိုရင် သူ့နိုင်ငံသားကဒ် က ဘင်္ဂါလီ ရခိုင်ဖြစ်ရမှာနော် ၊ ခု က ရခိုင် ဗုဒ္ဓဖြစ်နေတာပေါ့ ၊ ခု အားလုံးသိတော့ ရှက်ဖွယ်ပေါ့ရှင် ၊ ကဲ ဘယ့်နယ်ရှိစ လူယုတ်မာကြီး၊ ဒီတစ်ကြော ဘယ်လို ကိုယ် လွတ်ရုံးမလဲ စောင့်ကြည့်နေပါ့မယ်။ အဲဒီကိစ္စက မှတ်ပုံတင် သိမ်းခံရမယ် နိုင်ငံသား ဥပဒေ အရ ထောင်လဲကျ မယ်၊ လ.ဝ. ကတွေပါ အတွဲလိုက် (ရထားတွဲလို) ရှုပ် သွား မယ်ထင်ပါတယ်ရှင် ၊ နိဂုံးကတော့ မကောင်းသူတွေ ဟာ တစ်ချိန်ချိန်တော့ —————–
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့် ဟိုးအရင်ထောက်လှမ်းရေးခေတ်က သူနဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကို ရဲ အချုပ်ခန်းရောက်အောင်
ပို့နိုင်တဲ့ အထိ အစွမ်းထက်သူဖြစ်ပါတယ်၊ ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်ကြီးမိုးဇက်ကိုလဲညီအကိုတော်စပ်တယ်လို့ ပြောပြီး လူအများအမြင်နောက်လောက်အောင်တွဲပြနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီတုန်းကထောက်လှမ်းရေးကဟေ့
သူ့အပြောနဲ့အဖမ်းခံရခဲ့တဲ့သူတွေလဲ ခု ထိရှိနေပါတယ်၊သူတို့လဲသက်သေထွက်ဆိုပေးချင်နေကြပါတယ်၊
ခုချိန်ထိ မ.ထ.သ ဥက္ကဋ္ဌ အရှိန်အဝါနဲ့ စည်းကမ်းအကြောင်းပြပြီးဖမ်းစေခိုင်းတဲ့အတွက် အဖမ်းခံကြသူတွေ
လဲ ၁၀ ဦးထက်မနဲရှိနေပါတယ်၊
အစစ်အဆေးခံရတာကတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှဇတ်လမ်းများ ကြောင့်လို့သိရပါတယ်၊
ကပ်ဖားပြောတဲ့စကားကတော့ သူ့ကိုအင်တာနက်ပေါ်တင်သူတွေဟာ မွတ်စ်တွေပါတဲ့.ဒါကြောင့်မွတ်စ်တွေ ကိုနှိပ်ကွတ်မယ်လို့မကြာခဏကြိမ်းဝါးနေကြောင်းလဲသိရပါတယ်၊
အဲဒီနောက်မှာတော့ လ.ဝ.က ခရိုင်မှုးနဲ့အတူ မကြာခဏဆိုသလို တွဲသွားတွဲလာ ရှိနေတာကိုမြင်တွေ့ကြရ
ခုတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးတစ်ကြီးခရီးသွားရန်လိုအပ်တဲ့ ဝေဒနာရှင်များဟာ ကြီးစွာသောအခက်
အဆိုးဆုံးဆိုရသော် အရေးတစ်ကြီးကုသခံယူရန်လိုအပ်သောလူနာများမှာ အသက်အသေခံရန်မှတစ်ပါး
မိန်းကလေးကိစ္စ ကိုတော့ ဆက်ပြီးမပြောပြလိုတော့ပါ၊
သိန်း ၁၀၀ ကြီးတောင်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့.အကောင်ကြီးကြီးပေါ့ဗျာ။.
ရဲဆိုတဲ့အကောင်တွေတော့ သရေ တောက်တောက်ကျနေမှာသေချာသပေါ့ဗျာ..
ဘဝဆက်တိုင်း ဆက်တိုင်း အဲဒီမြို့က အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မဖြစ်ရပါလို၏..အရှင်ဘုရား….
ကျနော်လဲ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ အဲဒီစာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့လဲ အဲဒီအကြောင်းကို၊ တတ်နိုင်သလောက် ခင်ရာ မင်ရာတွေဆီကို ဖြန့်ဝေပေးကြပါ။
ဒီမြို့ က ရဲ က ဒီမြို့ က ရာဇဝတ်ကောင်ကိုစစ်မယ်ဆိုရင် အလကားဖြစ်မှာ…..
ဟို လ.ဝ.က ခရိုင်မှုးလဲ တစ်ကယ့်လူပါဘဲဗျာ….အဆိုးတစ်ကာ့အဆိုးတွေများလာစုနေသလားထင်ရတယ်.
အေးပေါ့..ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ..ဟို ကပ်ဖားယပ်ဖားကောင်က မြှောက်ပင့်လို့ ထလုပ်ရင် သူဘဲခံရမှာ….
နေအုံးဗျ..ခုမှသတိရ မိတယ်.. အဲဒီ ကပ်ဖားဆိုတဲ့ကောင် ဟာ ပါတီ လူကြီးဆို…..မလွယ်ရေးချမလွယ်တဲ့. ကောင်ပါလား..အကာအကွယ် လဲ ကောင်းကောင်းယူထားပုံရတယ်ဗျ…..
အေးဗျ…ပါတီကလဲ အာဏာရပါတီလဲဖြစ်နေပြန်တယ်လေ… အဲဒီက လူကြီးတွေလဲငြိမ်ပြီးထိုင်ကြည့်နေကြတာ လား….
ပါတီကလူကြီးတွေလဲ…ဒီကောင်ပေးကမ်းစာကိုလက်ခံထားပီး ထိုင်ကြည့်နေကြတာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်….
အင်း ရင်လေးမိပါရဲ့….မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ် မြို့သားများရယ်…..၊၊၊၊
မေးကြည့်တော့ သူတို့တွေ ဟာ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့သူတွေပါ..။
တစ်ကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင် လူ့အခွင့်ရေး ဆုံးရှုံးခြင်းခံနေကြရ တဲ့သူတွေပါ..။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာကြီးကရော သူတို့ကို တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးနိုင်မှာလား..။
ဒီလိုမျိုး ခွဲခြားဆက်ဆံ ခြင်းခံနေရတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူးဗျာ…။
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်..မွတ်စ် မကလို့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ရှိတယ်..။
ကျွန်မတို့မလဲဒီလူကြီးအကြောင်းကိုကြားရဖန်များတော့သေဘဲမသေနိုင်ဘူး။အမြဲတမ်းငွေပေးလိုက်ပြီးသွားလိုက်နဲ့စိတ်ကုန်လာပြီ။ဒါနဲ့နေဘာအုံးဒီလူကြီးလက်ထက်မှာသံတွဲမ.ထ.သ ရူံးပျောက်ပြီး၊ငှားသုံးရတဲ့နှစ်တွေချည်းဘဲဆို။မထသရံပုံငွေတွေကိုလည်းဘုန်းပြီးသုံးထားဆို ။လုပ်ပါဦးဟိုလူကြီးတို့ရေ။ငွေဘုန်းတဲ့လူတွေနဲ့လဘ်စားတဲ့လူတွေနဲ့ဂွတော့ကျပြီရှင်
ဟ ဟ မိုက်လှချည်လားဟ .. မိုးကောင်းတုန်း ခံထားဦး ပေါ့ကပ်ဖားရယ်.. မိုးရပ်မှ ထိုးသတ် လိုက်ကြတာပေါ့ ခွီးခွီး …
နေ၀င်ချိန်တွေလာတော့မှာပါ ကွာ ..(မထင်)
သတ်ဆိုးရယ် ရှည် …
ဒီကောင်မအေဘေးကိုဆော်မယ့်လူမရှိဘူးလား။ ဆော်မယ့်လူကိုကြိုက်ကြေးပေးမယ်ရှင် လုပ်ကြပါဦးသူကဘဲကောင်မလေးတွေလာဖျက်ဆီးနေ သူ့ကိုဝိုင်းပြီအမဲဖျက်သလိုဖျက်မယ့်တုထ်ကြီးရှာပေးကြပါဦး
အဲဒီတော့..အဲဒီမိန်းကလေးက.. အရမ်းစွဲလန်းမိသွားပါတယ်ပြောပြီး… .အိမ်အထိခေါ်လာနိုင်တာပေါ့..။
အဲဒီလိုနဲ့..တခုသောမနက်မှာ.. မတရားကျင့်ခဲ့တဲ့ ယောကျာ်းရဲ့.. ယောကျာ်းတန်ဆာကို ဖြတ်လိုက်ပါတယ်..။ မသေပါဘူး..။ အဲဒီမိန်းကလေးကပဲ..ရဲကို ဖုန်းဆက်..ဆေးရုံဖုံးဆက်..မီဒီယာကို ဖုံးဆက်အပ်လိုက်ပါတယ်..။
ဒီသတင်းဟာ..ဆွစ်ဇလန်သတင်းစာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀လာက်က ..တကယ်ပါခဲ့တာပါ..။
မြန်မာမိန်းကလေးတွေ.. ဒီလိုသတ္တိရှိကြစေချင်တယ်..။ ကမ္ဘာမှာ.. မြန်မာမဟေ့ဆိုပြီး ဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပဲ..။
ဒါပေါ့… မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းကလေး အများစုက ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလို ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါမျိုးဆို အသံမထွက်ဘူး ။ ဖင်ပေါ်ခါနီးစကတ်ဝတ်တော့ မရှက်တတ်ဘူး … ။ ဖြစ်သင့်တာနဲ့ လုပ်သင့်တာ တွေးပြီး ရဲရဲ ရှေ့တိုးစေချင်တာပါပဲ ။ ဒါမှ ဒီလို လူမျိုးတွေ ပပျောက်မှာ ။
အမရေး..ရက်စက်ပါပေ့ တဂျီးရယ် …။ သင်တန်းလေးဘာလေး ထော်ပါလားဂျ…။ တဂျီးနော် ဘယ်ဂလိုညိုးကြီး ကျောလိုက်တာလဲ ဂျ…။ အဲ့ဒလိုချို ဖျားယောင်းထော် ဖြတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျ မဲ့ကိန်းရောက်မပေါ့ ဂျ…။ ဒမာတော့ဖြစ်နိုင်တေးပါဘူး တဂျီးရာ…။ တခြားအကြံကောင်းရေး ပေးပါဂျာ..။
ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲမြို.မှာ အဲဒီမိတ္ဆာကောင် ထွန်းသန်းကျော်ဆိုတဲ. အကုသိုလ် ကောင်ကို ဘယ်သူမှ မသတ်ရဲကြဘူးလား ရခိုင်ပြည်က
ယောက်ကျားတွေ ဘာလုပ်နေကြလဲ ထမီပို.လိုက်ရမလား သတ်မယ်
လူမရှိရင် ငါတို.မင်းလှ မိုးညိုနယ် လာခေါ်ပါလား ပိုက်ဆံမယူဘူး အခမဲ. သတ်ပေးမယ်။
အား..ဟုတ်ကဲ့ဗျ….ဒီမြို့ကလူတွေက ထမီ လက်ဆောင် လက်ခံရတော့မှာပါ……… အသေကြီးတွေလို ခေါင်းငုံ့ပီး နေကြပါတယ်ဗျ.. ခြုံပုတ်ထဲက လက်သီးဆုပ်ပြနေကြတာပါ.. တကယ်တော့..သူတို့တွေလဲ ရွံ့ကြောက်ကြီးဖြစ်နေကြတာ…သူ့ကိုဘဲ ပြန်ဖားနေကြရတာ.. အင်း ခုတော့ သူ့အတွက် နေဝင်ချိန် ရောက်လာတော့မယ်ထင်ပါတယ်…
ကယ်ကြပါအုံး ကယ်ကြပါခင်ဗျ ကယ်တော်မူကြပါ —————–။ ကျွန်တော် အမိုက်အမဲ ကိုရွှေမောင်မောင် ကပ်ဖား လေးကိုသနားသောအားဖြင့် စောင်မပေးတော်မူကြပါ————-။ ဝန်ခံပါတော့မယ်ဗျာ ကျွန်တော် ဟာ မ.ထ.သ ရံပုံငွေ များကို မိမိအကျိုးစီးပွါးအတွက် အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ ကြောင်းပါခင်ဗျ………………။ သင်္ကြန်ရောက်လာလျှင်လည်း အကြောင်းအမျိုးပြကာ သောက်စားပျော်ပါး ရန်အတွက် မ.ထ.သ ရံပုံငွေများအပြင် ရန်ကုန်မှ ရဲအောင်လံကားများပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေး ထံ မှလည်းလိမ်လည် လှဲ့ဖြားပြီးသိန်းနှင့်ချီ ၍ စရင်းအမျိုးမျိုးပြကာတောင်းယူ ကိုယ်ကျိုးအတွက်သုံးခဲ့ပါကြောင်းပါခင်ဗျ—။ ၎င်းအပြင် ဂေါက်ရိုက်ရန်အကြောင်းပြကာ ငွေများကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်းပါခငိဗျ….။ ကျွန်တော် ယ္ခုဝယ်ယူထားပါသောစက်မှုဇုံထုတ် ဂျစ်ကားစုတ် ကလေးကိုဝယ်ယူခဲ့စဉ် ကငွေတိုးဖြင့်ချေး ခဲ့ရပါသည်၊ ၎င်းအကြွေးများဆပ်ရန် ငွေ အရေးတစ်ကြီးလိုအပ်နေပါသဖြင့် ပြောင်းရွှေ့သွားပါသော မြို့နယ်မှုးထံမှ ကျပ် သိန်း ၃၀၀ ချေးယူခဲ့ပါသည်၊ မြို့နယ်မှုးပြောင့်ရွှေ့ရန်အမ်ိန့်ထွက်လာပါသဖြင့် ကျွန်တော်ကိုရွှေမောင်မောင် လူကလေး မောင် ကပ်ဖားမှာ အထက်ပါလိမ်လည်၍ ရယူထားသောငွေ များဖြင့်ဝယ်ယူထားပါသော ကုန်ကားကြီးတစ်စီးကို သိန်း ၃၅၀ ဖြင့်ရောင်းပြီးမြို့နယ်မှုးအားအကျေအလည်ဆပ်ခဲ့ပါကြောင်းပါခင်ဗျ——————။
လ.ဝ.က ကိစ္စကလည်းအမှန်မှာ ကျွန်တော်၏ အမေ သည် ဘင်္ဂလီိလူမျိုးဖြစ်ပါသောကြောင့် ၎င်းသို့ဖြစ်ရ ခြင်းအပေါ် စိတ်နာပါသဖြင့် မွတ်စ်များအပေါ်အခက်အခဲများကျရောက်လာအောင် ခရိုင် လ.ဝ.က မှုး အား ယ္ခု ကဲ့သို့ ပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးမြှောက်ပင့်အားပေးခဲ့ပါကြောင်းပါခင်ဗျ..။ ကျွန်တော်၏တိုက်အိမ် အား ဂဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုဖြစ်စေလျှက်လူများကိုဖမ်းဆီးအရေးယူရန်ကြံစည်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျ.—————–။ ယ္ခုသော် ကျွန်တော်ကိုရွှေမောင်မောင် ကပ်ဖား လူကလေး ထွန်းသန့်ကျော်မှာ နောင်တ တရားများ နောင်မှရနေပါသောကြောင့် ကျရောက်လာတော့ မည့်အပစ် များမှ ကူညီ ကာကွယ် ကယ်တင်ပေးပါရန် အသနားခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား………………။။။
ဟိုဘက်က သတင်းထောက်ရေးတာလည်း အမှန်ပဲဗျ။ ကျနော့် စိတ်ထင် လူတွေ ကို direction ပြောင်းအောင်လုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ…။ http://myanmargazette.net/47671/mandalay-gazette-2/letter-to-the-editor